Basic Political Science Part (13) ~ လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်
Basic Political Science Part (13)
နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်နှင့် သဘောသဘာဝများ အပိုင်း (၁၀)
မျက်မှောက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ် အယူအဆများသည် ... မူလဆင်းသက်လာရာ အကြောင်းတရား များဖြစ်သော ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်၏ အဆုံးအမ တရားဒေသနာတော်များနှင့် သော်လည်းကောင်း ... ၊ ရှေးခေတ် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ အဆုံးအမ သဘောတရားများဖြစ်သော မင်းကျင့်တရား ဆယ်ပါး၏ စံတန်ဖိုးများနှင့် သော်လည်းကောင်း ... မျက်မှောက် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ တော်ကြီးအား လေးကြိမ်တိုင်တိုင် စုစည်းထူထောင်ခဲ့ကြသော အာဇာနည် ခေါင်းဆောင် ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ခံယူချက် သဘောထား အတွေးအခေါ် အယူအဆများနှင့် သော်လည်းကောင်း ကိုက်ညီခြင်းမရှိဟု ဆိုရပါမည် ... ။
ယေဘူယျအားဖြင့် ... နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု နိမ့်ကျခြင်းသည် ၄င်းနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်အပေါ် မူတည်ပေသည် ... ။ သို့သော် ဤအချက်တခုတည်းကိုပင် ထပ်မံ ခွဲခြမ်းလေ့လာပါက အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်အား မည်သူတို့က ပြဌာန်းသနည်း .... ဟူသော မေးခွန်းမျိုး ရှိလာရပါသည် .... ။
၁။ တပါတီ (သို့) အာဏာရှင်တို့က ... ၄င်းတို့စိတ်ကြိုက် (သို့) ၄င်းတို့ သဘောအမိန့်အတိုင်း .... ပြဌာန်းသည်လော။
၂။ ပြည်သူလူထု သဘောဆန္ဒဖြင့် ပြဌာန်းပေးသည်လော ဟူသည့်အချက် နှစ်ချက်အား တွေ့ရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ ... နိုင်ငံတနိုင်ဟု သတ်မှတ်မည်ဆိုပါက ပြည်သူလူထု ဆန္ဒသဘောထားများကို လျစ်လျူရှု၍ မရနိုင်ပါပေ ... ။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်အား ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒသဘောထားအပေါ် အခြေခံ၍ ဤနိုင်ငံတော်ကြီး ဤဒေသကြီးအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော ... ပြည်သူ ပြည်သား အပေါင်းတို့၏ ဆန္ဒသဘောထားများဖြင့် ဤနိုင်ငံတော်ကြီးအား ထူထောင်ပါသည်ဟူသော ... ကဗျဉ်းစာတမ်းထိုးနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါမှ တရားဥပဒေသည်လည်း စိုမိုးပြီး လောကပါလတရား (လွတ်လပ်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ တရားမျှတခြင်း၊ တန်းတူညီခြင်း) များလည်း ပေါ်ထွန်းပါမည် ... ။ ဤသို့အားဖြင့် ... ဤနိုင်ငံ ဤပြည်သူတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ အရှိန်အ၀ါ သည်လည်း ... ကြီးမားပြီး နိုင်ငံတော်ကြီး ဒေသပတ်ဝန်းကျင် အ၀န်းအ၀ိုင်း၌လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာ မည် ဖြစ်ပါသည် ... ။
ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ဖို့ရန်အတွက် (သို့) ဒေသအတွင်း လောက ပါလတရားများ ဖြစ်ထွန်း ပေါ်ပေါက်လာရန်အတွက် မလိုလားအပ်သော အောက်ဖေါ်ပြပါ စနစ် (သို့) ၀ါဒများကို ဆန့်ကျင်ပြီး မကျင့်သုံးရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည် ... ။
၁. အာဏာရူးသောဝါဒ (Authoritarianism)
၂. ကိုယ့်မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းများ ကောင်းစားရေးအတွက်သာ ဆောင်ရွက်တတ်သောဝါဒ (Depotisim)
၃. အာဏာရှင်စနစ် (Dictatorship), (Totalitarianism)
၄. ကိုယ်နှင့်မတူတိုင်း တူရာအုပ်စုဖွဲ့ဗိုလ်ကျစိုးမိုးခြင်း၊ ညှင်းဆဲနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခြင်းဝါဒ (Tyranny)
၅. စစ်ဝါဒ (Militarism)
စသည့် စနစ် (သို့) ၀ါဒများကို မိမိတို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ... မဖြစ်ပေါ်အောင် မကျင့်သုံးနိုင်အောင် ပြည်သူ ပြည်သားတွေသည် မိမိတို့ မိသားစုအရေးထက် ပို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်လည်းကောင်း ... ၊ နိုင်ငံတော်အတွင်း ... လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း၌ လောက ပါလတရားများ ဖြစ်ထွန်းနေအောင် သော်လည်းကောင်း ... ဦးစွာပထမ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ပေလိမ့်မည် ... ။
နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဘာသာရပ်ဖြင့် မျက်မှောက် မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေအား ... လေ့လာရာ၌ ယထာဘူတကျကျ တည့်တည့်မက်မက် ကြည့်ရန် လိုအပ်ပါ၏ ... ။ ဤစာတမ်းသည် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူ လူထုအကျိုး ... ၊ နောင်အခါ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မည့် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်လောင်း လူငယ် လူရွယ်များ အတွက် ... သတိပြုစရာ ... ၊ သင်ခန်းစာယူစရာ ... ၊ ဝေဖန်စရာ ... ၊ ဆင်ခြင်တုံတရား ... လက်ကိုင်ထား၍ နိုင်ငံအကျိုးသယ်ပိုး စေခြင်းငှါ ဤနိုင်ငံရေးသိပ္ပံ လေ့လာရေးစာတမ်း၏ တခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါ၏ ... ။